လမင်းခင်: ကျမနဲ့ စကားအခြေအတင် နှင့် နိုင်ငံရေးစစ်ရေးပညာရှင်များ--ဟူသည်
မှန်တယ် လောလောဆယ် အမပြောတဲ့ လူတွေဘဲလိုတယ် ပြီးမှ အသင့်ဝင်ထိုင်တာမျိုး မလိုခြင်ဘူး
အစ်မရေ ကိုယ်က လက်ဝါးတခုကို လူတယောက်ကို ပြလိုက်ရင် အဲဒီလိက်ကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်ရင် လက်ဝါးမဟုတ်ပဲ လက်ဖမိုး ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူ့ဘက်ကကြည့်တော့ လက်ဝါး၊ ကိုယ့်ဘက်က ကြည့်တော့ လက်ဖမိုး နှစ်ယောက်စလုံးကို မှားတယ်လို့ ပြောလို့မရဘူး။ ကိုယ့်အယူအဆဟာ ကိုယ့်အတွက်မှန်ပေမယ့် တဘက်လူအတွက် မှားနိုင်တယ်။ အမှန်တရားဆိုတာကို ပညတ် သတ်မှတ်ထားတာတွေနဲ့ တိုင်းတာလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ သူ့နည်းသူ့ဟန် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ နိုင်ငံကို ချစ်တဲ့သူတွေ အချင်းချင်းကြားမှာ သူမှန်မှန်တယ် ကိုယ်မှမှန်တယ်ဆိုတာ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ အခုထိ အောင်မြင်အောင်တာကို သူညံ့လို့ ကိုယ်ညံ့လိုဆိုတာထက် အကုန်လုံးမှာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသးလို့သာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်အတွက် ဖြတ်သန်းတဲ့နေရာမှာ တယောက်နဲ့ တယောက် အမြင်တူချင်မှတူမယ် ဒါကိုသွားပြီး အပြစ်မြင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။
တော်လှန်ရေးတခုမှာ ပညာရှင်ဆိုတာလည်း အထိုက်အလျောက်တော့ လိုအပ်တာပဲလေ... အဆင့်မြင့် ပညာအရည်အချင်း၊ နိုင်ငံတကာက လက်ခံမယ့်အရည်အချင်းတွေလည်း လိုပြန်တာပေါ့.. ပညာရှင်တွေထဲမှာလည်း အချိူ့ က ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ကိုယ်ပညာသင်ပြီးခါမှ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဒီလိုအခြေအနေ မှာ ပညာရှင်တွေကပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာကြတာကို သမီးအနေနဲ့ တော့ ၀မ်းသာစရာလို့မြင်ပါတယ်။ အခုလို မေမေ့ဘက်က အမြင်က မေမေ့ဘက်က ကြည့်ရင်တော့ အမှန်ပါ။ အခြားတဖက်က ကြည့်ပြန်ရင်လည်း မှန်တယ် မြင်ပါလိမ့်မယ်.. ငယ်နိုင် ပြောသလိုပါပဲ.. သမီးအနေနဲ့ ကတော့ ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရာတခုကို ဘေးအမြင်ကနေ ၀င်ကြည့်စေချင်တယ်။ ဘေးမှာ ထိုင်နေသူဟာ နှစ်ဖက်စလုံးကို ပိုမြင်ရတယ်လေ.. ဟုတ်တယ်ဟုတ်.. နောက်ပြီး သမီးမြင်တာကတော့ ပညာတတ်ဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေးကို စွန့် ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်း ရှိကောင်းရှိုနိုင်သလို တိုင်းပြည်အတွက် ပညာသင်တဲ့ ပညာရှင်တွေလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ...
အမှန်တော့ အဲဒီလို ဖြစ်သင့်ပါတယ်..
တကယ်တော့ အမရေ. အရေးကြီးဆုံးက စိတ်ဓာတ်ပါပဲ..
ဘယ်နေရာပဲ ရောက်ရောက် ဘယ်နေရာမှာပဲ နေနေ..
မဖောက်မပြန် မပြောင်းမလဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်က အရေးကြီးဆုံးပါပဲ...
အရင်တုန်းက အရေးအခင်းတိုင်းမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါခဲ့တဲ့လူတွေ.အခုချိန်မှာ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ နေတာ
တွေ .. သာတဲ့ဖက် ခုန်ကူးနေတာတွေ.. စိတ်မဝင်စားတော့တာတွေ အများကြီးပါပဲ...
အဲဒီလိုပဲ.အရင်တုန်းက အရေးအခင်းမှာ မပါပေမဲ့ ခုချိန်မှာ . စိတ်ပါလာပြီး လုပ်သင့်သလောက် စိတ်ရောကိုယ်ပါ လုပ်နေတာတွေလဲ အများကြီးပါပဲ..
အရင်တုန်းက မပါပဲနဲ့. ခုချိန်မှာ အမှန်အတိုင်း မဝေဖန်ရပါဘူးလို့ ဘယ်သူက ပြောသလဲ.. ဘာမှ မလုပ်ပေမဲ့ ဘေးက မြင်သလို ဝေဖန်ထောက်ပြတာကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားမယ့်အစား.. ဘာမှမလုပ်ပဲ လာမဝေဖန်ပါနဲ့ပြောတာတော့ မသင့်တော်ဘူး ထင်ပါတယ်.. အဲဒီလို ဝေဖန်ရေးမရှိ အီယော အီယော နေခဲ့ကြလို့ နိုင်ငံရေး ဇာတ်မျောကြီး ဖြစ်နေရတာပါ.. မလုပ်မရှုပ်မပြုတ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာမှ မလုပ်နိုင် လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကို နေရာမပေးတဲ့ အဘိုးကြီးတွေကို မဖယ်ရှားနိုင်တာကိုက NLD ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ပါပဲ.. ပါတီတခုရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို တောင် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့. တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုအုပ်ချုပ်နိုင်မလဲ... အခုအချိန်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ကြဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီ...
အဓိက ကတော့မဖေါက်မပြန်နဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကို လျောက်ဖို့ပါ
myo thaw said...
အစ်မရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ ... အခုမှဘလော့ရေးတယ်ဆိုတာသိရလို့ပါ ... အစ်မရဲ့စိတ်ဓါတ်ကို အစ်ကိုကြီးပြောပြထားလို့ သိသင့်သလောက် သိထားတာပါ ... သမီးတွေကို လည်းလမ်းပြတာ အရမ်းကောင်းတယ် .. အကြီးမဆိုရင် အမေတူ သမီးလို့တော့ပြောရမလားဘဲ ... ကျနော်တို့တစ်တွေအားလုံး လက်ချင်ယှက်ပီ ကိုယ်လုပ်နိုင်ဘဲဘက်က လုပ်ကြရင် အောင်မြင်မှုနဲ့ အိမ်ပြန်ကြရမှာပါ ... သူများတွေဘဲလိုဘဲ ပြောပြော ကျနော်တို့ရဲ့အိမ်က မြန်မာနိုင်ငံပါ ...